Iindaba - Pu camera iiglavu productline productline
Pu camera iiglavu productline
Iiglavu ezigqunywe ngePU zikwabizwa ngokubaIiglavu ezigqunywe yirabha yePUokanye PU umnwe okanye iiglavu zesundu.Ngokokusebenza kwayo, inokwahlulwa ibe ziindidi ezimbini: uhlobo oluqhelekileyo kunye nohlobo oluchasayo.Iiglavu zigqunywe ngokupheleleyo ngepolyurethane ephathwa ngokukodwa ukubonelela ngokumelana nokutyibilika okugqwesileyo kunye nokuthintela ukubila kunye nokungcoliseka kwesandla somntu.
Umnwe okanye intende yeeglavu ezinithiweyo zenayiloni ziqatywe nge-PU resin, enganyusi nje ukusebenza kwe-anti-skid kodwa ikwanyusa ukusebenza kobushushu.Yimveliso eyimfuneko yomgca wemveliso we-elektroniki ochanekileyo.
I-1.PU yokugqoka ine-asidi kunye nokuchasana kwe-alkali, enokuthintela ngokufanelekileyo ukutyibilika, ukuphepha ukutyibilika xa ubamba amanqaku, kwaye ugweme i-fingerprint eseleyo, ukuphucula imveliso.
2. Ukuchasana nongcoliseko, ukutyibilika, ukuchasana nobushushu, ukumelana nokunxiba, kulula ukufunxa umbilo, ukungenelwa komoya kakuhle.
3. Ngenxa yokuba i-elastic kakhulu, yenza ukuba umsebenzisi azive efanelekile esandleni.
I-80% yomsonto wenayiloni ongenathuli kunye ne-20% yokusebenza okuphezulu kwefayibha yobhedu / ifayibha yekhabhoni elukiweyo;
Iminwe okanye iintende ezifakwe kwi-PU resin.
1. I-resin ye-conductive yongezwa kwi-PU yokugubungela ukufezekisa umphumo ongcono we-antistatic, onokuphepha ukudibanisa ngokuthe ngqo kunye namacandelo e-electrostatic sensitive ngeminwe yabaqhubi, kwaye inokukhulula ngokukhuselekileyo umrhumo we-static womzimba womntu oqhutywe ngabaqhubi.
2. Ukuxhathisa okuhle kwe-skid kunye nokumelana nokunxiba.
3. Ukungena komoya okulungileyo, kuyahlambeka.
Ixesha lokuposa: Jan-24-2022